Global Voices teny Malagasy · Fitantaran’olon-tsotra mikasika ny Antsafa
Lohahevitra hafa Ady & FifandiranaAntsafaDikaFahalalahàna mitenyFahasalamànaFamakiambokyFampandrosoanaFanabeazanaFanadihadiana TrangaFanampenam-bavaFanaraha-masoFanatanjahantenaFanentananaFanoheranaFiainana ManokanaFidiranaFifandraisana iraisam-pirenenaFifidiananaFifindrà-moninaFisamborana sy faneriterenaFitantanam-pitondranaFitaovanaFitenyFitsipikaFivavahanaFizakàna ara-tsainaFoko sy FiavianaHafanam-poHafanàm-po nomerikaHaisoratraHehyHevitraHiper-barrioLahavolanaLalànaLanonanaMedia sy Fanoratan-gazetyMediam-bahoakaMozikaMpitsoa-ponenanaOLPC OrogoayPolitikaSakafoSarimihetsikaSaripikaSendikàSiansaSivanaSolovavaTanoraTantaraTari-dàlanaTatitraTeknolojiaTeknolojia-aterinetoTeratanyTetikasaToekarena sy FandraharahànaTontolo_iainanaTorolalanaTsidikaTsy fitononana anaranaVaovaoVaovao MafanaVaovao TsaraVehivavy sy MiralentaVoinaVonjy VoinaZavakanto & KolontsainaZon'ny Nanova na Mpitia Mitovy Fananahana (LGBT)Zon'olombelonamedianomad green
Tahiry isam-bolana Avrily 2014 1 Lahatsoratra Marsa 2014 1 Lahatsoratra Febroary 2014 4 Lahatsoratra
Febroary 2013 1 Lahatsoratra Janoary 2012 1 Lahatsoratra Oktobra 2011 1 Lahatsoratra Septambra 2011 1 Lahatsoratra Aogositra 2011 2 Lahatsoratra
Tantara misongadina mikasika ny Antsafa	Wikitongues: Raketo An-tahiry Ny Tenim-pirenenao Ny Wikitongues dia ezaky ny fiarahamonina mba hahafahan'ny olona manerantany mahafantatra sy mahita ireo tenim-pirenena 7000 manerana izao tontolo izao amin'ny alalan'ny lahatsary sy bilaogy andraisan'ireo olom-pirenena anjara.
[StoryMaker] Mustafa El-Ani Ao Amin'ny Foiben-gazety Tsy Miankina Kiorda Nandritra ny Lasin'ny StoryMaker notontosaina tamin'ny volana janoary tao Amman, Jordania, nifampireaka tamin'i Mustafa El-Ani avy amin'ny Independent Media Centre Kurdistan, iray amin'ny mpandritra ao an-toerana momba ny tetikasa, nifampizara ny traikefany momba ny fanarazan-draharaha ny StoryMaker tao Iràka izahay.
19 Avrily 2014 Wikitongues: Raketo An-tahiry Ny Tenim-pirenenao Mpanoratra Laura Morris · Fanadihadiana Tranga 19 Marsa 2014 WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia” Mpanoratra Gabriela Garcia Calderon · Fitaovana 19 Febroary 2014 [StoryMaker] Mustafa El-Ani Ao Amin'ny Foiben-gazety Tsy Miankina Kiorda Mpanoratra Eddie Avila · Lanonana Tantara Malaza Indrindra Manerantany 2 andro izayAfrika Avaratra sy Afovoany AtsinananaFankahalambahiny atrehin'ny Syriana mpitsoaponenana iray mikasa ho any Eoropa
Tantara mikasika ny Antsafa 20 Febroary 2014
20 Febroary 2014
[StoryMaker] Privilege Musvanhiri Avy Ao Amin'ny Fiarahamonin'ny Finday Ao Zimbabwe Mpanoratra Eddie Avila · Lanonana Tamin'ny Lasin'ny StoryMaker natao tamin'ny volana Janoary tao Amman, Jordania, niresaka tamin'i Privilege Musvanhiri avy ao amin'ny Mobile Community Zimbabwe (Fiarahamonin'ny Finday Zimbabwe) izahay.
19 Febroary 2014
[StoryMaker] Emad Shenouda Sy i Al Sawt al Hurr Ao Egypt Mpanoratra Eddie Avila · Lanonana Tao amin'ny Lasin'ny StoryMaker notontosaina tao Amman, Jordania tamin'ny volana Janoary teo, niresaka tamin'i Emad Shenouda avy ao Ejypta izahay, iray amin'ireo mpandrindra ny tetikasa ao amin'ny faritra, izay nizara ny traikefany tamin'ny fanazarana StoryMaker tao Ejypta.
09 Febroary 2014
Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići Mpanoratra Laura Morris · Famakiamboky Any Bosnia sy Herzegovinia, maro ny mpianatra avy any ambanivohitra no mandeha bus isan'andro hianatra any ambonivohitra ka lany andro miandry bus ora maromaro tsy manao na inona na inona.Tsapan'ireo mpiandraikitra ny Tranombokim-Bahoaka Zavidovići izany ka nanoloran-dry zareo programa hanazarana ireo tanora ireo teknolojia vaovao.
12 Janoary 2014
Diferencial CAC: Hacklab Ao Quito, Ekoatera Mpanoratra Juan Arellano · Fanadihadiana Tranga Sehatra hoan'ireo tetikasa momba ny zavakanto sy ny kolontsaina nomerika ny Diferencial CAC, sehatry ny mpijirik, fiaraha-miasa, ary fampitana ireo karazan-kevitra hiaraha-miasa sy teknolojika izay hampiantranoin'ny Foiben'ny Zavakanto Ankehitriny ao Quito. Lahatsary sy resadresaka miaraka amin'ny mpanangana izany.
07 Janoary 2014
Milina Famoronana Tantara: Meograph Mpanoratra Rising Voices · Fanadihadiana Tranga Namerina namoaka tafatafa iray nataon'ny Transom.org ny Rising Voices, izay niresaka tamin'i Misha Leybovich, ilay mpamorona sy PDG-n'ny Meograph - "tantara amin'ny lafiny efatra".
11 Desambra 2013
Lahatsarim-Panadihadiana Velona: Fijoroana Vavolombelona momba ny Fanerena Tsy Hiteraka Mpanoratra Laura Morris · Mediam-bahoaka Nandritra ny taompolo 1990, maro ireo lehilahy sy vehivavy indizeny ao Peru no tratran'ny faneren'ny fanentanana ho momba; miasa miaraka amin'ny vondrom-piarahamonina any an-toerana ny tetikasa Quipu hanokafana lalana handrenesana ny tantara amin'ny alalan'ny fiarahan'ny teknolojia tranainy sy vaovao, avo lenta sy iva lenta, na an-tserasera na ivelan'ny serasera.
“Hanaovantsika Sarintany i Nizera”: Fatiman Alher Mpanoratra Rising Voices · Fanadihadiana Tranga Fantaro i Fatiman, iray amin'ireo mpandray anjara amin'ny tetikasa "Mandrakitra an-tsarintany ho an'i Nizera", nanamafy ny fahaizana mampiasa dizitaly izy ary nampihatra izany tamin'ny fianarana jeografia nataony. Nanampy azy hahay mijery vaovao ny taotsarintany diizitaly.
13 Novambra 2013
Tafatafa Amin'i Abdou Salam, Anisan'ny Tompon-kevitra Tamin'ny Tetikasa “Hanaovantsika Sarintany i Nizera” Mpanoratra Rising Voices · Fanadihadiana Tranga Fantaro i Abdou Salam, mpianatra taranja jeografia, iray amin'ireo mpandray anjara tamin'ny tetikasa Sarintany ho an'i Nizera.
28 Oktobra 2013
Ekoatora: Mamoaka Toro-làlana Maimaim-poana Ho Anà Rindrambaikon'Onjam-peo Ny Radialistas Mpanoratra Gabriela Garcia Calderon · Fanadihadiana Tranga Vao haingana izay dia namoaka vondronà toro-làlana ao anaty aterineto momba ireo fotokevitra samihafa ny Radialistas ho fanampiana ny vahoaka hampiasa onjam-peo sy rindrambaiko misokatra hanapariahana vaovao mikasika ny vondrom-piarahamonin'izy ireo. Ho ampahany amin'ny vondron-dahatsoratra Conectándonos anay, miresaka momba ilay tetikasa ny mpitantana io vondrom-piarahamonina io, Clara Robayo.
08 Oktobra 2013
Sarintany Iaraha-miasa Mba Hiraketana Ireo Nanjavona Tany Meksika Mpanoratra Silvia Viñas · Media sy Fanoratan-gazety Namorona sarintany iray mirakitra ireo olona 27.000 nanjavona vokatry ny "ady amin'ny zava-mahadomelina" nataon'i Meksika ny vondron'olom-pirenena iray. Hatreto dia tranga 6.890 no efa voarakitra ao anatin'io sarintany io hatramin'ny nanombohana izany tetikasa izany tamin'ny Jolay 2013.
Tahiry isam-bolana Septambra 2015 18 Lahatsoratra